10 Talooyin ku saabsan Fasaxa Qoyska ee Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Talooyin ku saabsan Fasaxa Qoyska ee Yurub
Fasax qoys oo ku yaal Yurub wuxuu farxad weyn u noqon karaa waalidiinta iyo carruurta da 'kasta ha noqotee haddii aad si wanaagsan u qorsheyso. Yurub waa dhulkii qalcado iyo buundooyin, jardiinooyin cagaaran oo cagaaran, oo keyd u ah halkaas oo gabdhaha iyo wiilasha yaryar ay iskaga dhigi karaan amiirad iyo amiirro maalin ah. Waxaa jira wadiiqooyinka socodka dheer iyo meelo badan oo loogu talagalay xiisaha bannaanka weyn, laakiin la safrida caruurta waa caqabad.
Laga soo bilaabo qorshaynta ilaa xirxirida, waxaan u qaabeynay hagaha ugu dambeeya safarka qoyska ee riyada. Kaliya raac kuwayaga 10 tilmaamaha ugu fiican ee fasaxa qoyska ee Yurub si loo hubiyo safar qoys.
1. Talooyin ku saabsan Fasaxa Qoyska ee Yurub: Ka Qayb Qaado Caruurtaada
Sirta fasaxa weyn ee qoysku waa marka qoyska oo dhami ay saaran yihiin oo ay ku faraxsan yihiin. Yurub waxaa ka buuxa astaamo cajaa’ib leh, soo jiidashada, jardiinooyinka madadaalada, iyo meelaha la booqdo, iyo in caruurtaadu kaqeybqaataan qorsheynta safarkaaga Yurub waxay isu rogi doontaa fasax riyo ah. Hore u sii baaritaankaaga, dooro soojiidashada aad rabto inaad booqato, iyo dhibco carruurtaadu jeclaan lahaayeen, ka dibna ay caruurtu wax doortaan 3-4 soojiidashada liiska. Qaabkan qof walba wuu ku faraxsan yahay oo wuxuu leeyahay wax maalin walba laga sugayo.
2. Joog AirBnB
Airbnb wuu ka jaban yahay, badan oo gaar ah, oo leh dareen guryeed, taas oo aad muhiim ugu ah caruurta markay guriga ka fogyihiin. Airbnb waa ikhtiyaar hoy weyn oo loogu talagalay fasaxa qoyska ee Yurub maxaa yeelay hoteelada Yurub waxay qaali ku yihiin qaali, xitaa heshiis quraac ah. Joogitaanka Airbnb waxay ku siinaysaa jiko aad ku karsatid cuntadaada, qadada-u-go, iyo waqtiga quraacda ah ee aad ka wada hadli karto maalinta.
Sidoo kale, waxaa jira meelo badan iyo asturnaan carruurta iyo waalidiinta, nasasho kadib maalin dheer sahamin.
3. Talooyin ku saabsan Fasaxa Qoyska ee Yurub: Ka Bax Xarunta Magaalada Mashquulsan
Yurub waxaa ka buuxa keyd dabiici ah oo muuqaal dabiici ah iyo jardiinooyin qaran, oo leh wadiiqooyin dhaadheer oo tamashle iyo goolal tamashleyn ah. Weynaanta dabiiciga ah ee Yurub waa mid aad u badan oo xitaa haddii aad la safreyso carruur yaryar, wali waad sahamin kartaa biyo-dhacyo iyo aragtiyo.
Jardiinooyinka badankood waa la heli karaa via tareenka ka xarumaha waaweyn ee magaalada. Haddii aad horay u sii qorsheyso oo aad u diyaar garowdo, ma jirto sabab aanad ugu raaxeysaneyn bannaanka oo aad ugu raaxeysato hawada cusub, kaymaha, iyo jardiinooyin mawduuc leh.
Qiimaha Tareenka Milan ilaa Rome
Pisa ilaa Qiimaha Tareenka Rome
4. Dalbo Gaadiidkaaga
Ogaanshaha habka aad ugu wareegi laheyd meel shisheeye waa muhiim marka aad la safreyso carruurta. Ma rabto inaad lumiso oo aad magaalada ku dhex meeraysato lug ama aad ka safarto garoonka diyaaradaha, iyadoo aan loo eegin cimilada. Sidaa darteed, qorshaynta iyo ballansashada habka gaadiidka ee Yurub waxay kuu ballan qaadi doontaa fasax qoys oo weyn.
Gaadiidka dadweynaha waa mid aad loo isku halleyn karo oo raaxo ku leh Yurub. Waxaa jira xulashooyin badan oo safar ah gudaha iyo dibedda xarumaha magaalada. Ku soo wareegida tareenka iyo taraamka ayaa ku habboon carruurta maxaa yeelay meel walba waad gaari kartaa, iska ilaali taraafikada miisaaniyadda safarkaaga.
Marka la barbardhigo gaari kireysasho iyo waqti aad u badan oo aad ku raadinaysid baarkinka ama aad diirada saareyso wadada, waad ku raaxeysan laheyd raacitaanka iyo cuntada fudud, markii a tareen la socda caruurta ee Yurub. A weyn faa iidada safarka Yurub tareenka tareenka ayaa leh in caruurtu ay si bilaash ah ugu safraan tareenka tareenka Euro.
5. Talooyin ku saabsan Fasaxa Qoyska ee Yurub: pack Light
safraya Saldhigyada tareenka ee Yurub gawaarida yar yar iyo shandadaha waaweyn ayaa dhib noqon kara. Saldhigyada tareenada qaarkood ma lahaan doonaan wiishashka ama wiishashka, marka waxaa fiican inaad xirxirato oo aad safarto iftiinka. Hubso inaad xirxirto gaariga wax lagu riixo iyo kuwa lagu qaado, habkan haddii carruurtu da 'weyn yihiin, waxay qaadan karaan shandadohooda.
Ka sokow, xirxirida nalka macnaheedu waa xirxirida dhamaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah safarka qoyska. Sayidka, carruurta oo ku mashquulinaya raacitaanka tareenka iyagoo wata sahay midabayn leh, buugaagta maqalka, ama kartoon daawashada waqtiga iPad-ka, waxay noqon doontaa caawimaad weyn.
Munich ilaa Qiimaha Tareenka Passau
Nuremberg ilaa Passau Qiimaha Tareenka
Salzburg ilaa Qiimaha Tareenka Passau
6. La Cunitaanka Caruurta Yurub
Waa inaad ogaataa in maqaayadaha ku yaal Yurub aysan carruurta siinin cunno, marka waa dad waaweyn’ qaybo qof walba. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay in la ogaado tusaale ahaan haddii aad u safreyso Talyaaniga, ma heli doontid cunnooyinka carruurta lagu cuno ee loo yaqaan 'pizza' ama baastada, sidaa darteed u diyaar garow.
laakiin, uma baahnid inaad wax ka cuntid. Mid ka mid ah talooyinkayaga ugu fiican ee loogu safrayo carruurta ku nool Yurub ayaa leh ciyaaraha qoyska. Wax badan ayaa laga sheegay jardiinooyinka Yurub iyo dabeecadda maxaa yeelay dhulalka cagaaran ee cagaaran waxaa si fudud loogu talagalay in lagu martigaliyo qoyskaaga dalxiis. Qabsato keega, miro cusub, iyo khudaarta suuqa maxaliga ah waxaadna diyaar u tahay casho sharaf. Qiimaha suuqyada beeraleyda ayaa si aad ah uga jaban suuqyada waaweyn iyo maqaayadaha. Si kor loo wada qaado, kaliya ka fikir aragtida aad ku raaxeysan doonto qaniinyo kasta oo gebi ahaanba bilaash ah.
7. Talooyin ku saabsan Fasaxa Qoyska ee Yurub: Doomaha Iyo Safarada Socdaalka Bilaashka Ah Ee Yurub
Waxaad kaligaa ku sameyn kartaa khariidad iyo buugaag iyo barnaamijyo, laakiin ku biirida doonta ama socdaalka socodka ayaa ugu fiican. Inta badan magaalooyinka Yurub waxaa ka jira a dalxiisyada socodka magaalada oo bilaash ah oo leh hage maxalli ah. Tilmaamahan farxadda leh ayaa tusi doona oo sheegi doona sirta magaalada ee sida fiican loo ilaaliyo, adigoon ku lumin dariiqa jidadka. Tilmaamuhu wuxuu sidoo kale tilmaami doonaa makhaayadaha maxalliga ah oo leh qado go'an isla markaana wuxuu bixin doonaa talooyinka ugu fiican ee ku saabsan waxa magaalada lagu qabanayo.
Yurub waxaa ka buuxa kanaallo iyo wabiyaal, si a dalxiis doon waa baashaal kale iyo hab gaar ah oo lagu safro loona sahammo. Waxay labadaba u noqon doontaa farxad carruurta iyo nasasho adiga kuu ah.
8. Waqti u yeel Gawaarida Carousel
Inta badan magaalooyinka Yurub waxay ku yeelan doonaan carousel dhalaalaya oo qurux badan fagaaraha weyn ee magaalada. Halkii aad ugu ordi lahayd barta xigta, joogso, oo u oggolow kiddos inay raacaan inta ay rabaan. Ku raaxeysiga raacitaanka gawaarida markii Eiffel Tower uu kaa hooseeyo gadaashaada, waa xilli xusuus mudan socod baradka iyo dadka waaweyn.
9. Talooyin ku saabsan Fasaxa Qoyska ee Yurub: Waqti u samee “Oops”
Sababta oo ah waxaad joogtaa Switzerland, dammaanad kama qaadaynno inay wax walba si habsami leh u socon doonaan safarkaaga qoyska. Markaad la safreyso carruur, wax kasta ayaa dhici kara, xitaa Yurub, markaa hubi inaad waqtiga uga harto safarka safarka. Waqti u sameyso lama filaanka aan qorsheysnayn, daahitaan, isbeddelada qorshooyinka mahadsanid kiddos, oo joog oo diyaar u ahaw inaad la qabsato.
10. Tus Caruurta Yurub Ka Baxsan Jidka La Garaacay
Mid ka mid ah talooyinkayaga ugu sarreeya ee safarka carruurta ayaa tusaysa iyaga sida loo sameeyo ka safri wadadii la garaacay ee Yurub. Ka fogow cufnaanta fagaarayaasha waaweyn, Khadadka gelato, iyo sawirada qoyska, adoo geynaya meelahaas qarsoon, tuulooyin qurux badan, iyo dabeecad aan caadi ahayn.
Carruurtu waxay jecel yihiin sheekooyinka sheekooyinka iyo xiisaha, markaa u qaad meelahaas halyeeyada laga sameeyay. Waa hab fiican oo waqti tayo leh lagu wada qaato, samee ugu fiican fasaxa qoyska ee Yurub, oo bar iyaga dhaqanka iyo taariikhda hodanka ah ee Yurub.
Yurub waa meel aad u wanaagsan oo qoys fasax loo tago wakhti kasta oo sanadka ah. Haddii aad tahay reer dalxiis doon ah ama aad xiiseyneyso indha indheynta iyo matxafyada, Yurub ayaa wada heshay. Intaa waxaa dheer, Yurub waa reer-saaxiibtinimo marka ay timaado gaadiidka iyo marinnada magaalada gaarka ah. Naga 10 tilmaamaha ugu fiican ee fasax qoys ee Yurub waxay noqon doontaa caawimaad weyn markaad qorsheyneyso safarkaaga xiga ama xitaa safarkaaga ugu horreeya ee dhulka qalcadaha iyo halyeeyada.
Qiimaha Padua ilaa Venice
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonaa inaan kaa caawiyo qorsheynta fasaxa qoyska ugu fiican Yurub tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "10 Talooyin ee Ugu Fiican ee Fasaxa Qoyska ee Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-family-vacation-europe%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Yurupwithkids qoyska reerka Qoyska fasax qoys traintravelwithkids